> Resource > iPhone > Sida loo View iPhone Xiriirada on Computer
Sidee baan ku arki kartaa xiriirada aan iPhone kombiyuutarka?
My iPhone lumay. Waxaan doonayaa inaan dib ugu soo xiriiro aan ku yaal iyo waxan ogaaday in aan synced aan iPhone la Lugood hor. Ma suroobi karaa waddo in ay si toos ah u arkaan iPhone xiriirada kombiyuutarka? Waxaan u baahan si deg deg ah.
Oo hadlaya Guud, Lugood abuuraa files gurmad qalabka Apple si toos ah marka aad u hagaagsan qalab aad la. Si kastaba ha ahaatee, gurmad Lugood faylka la aqrin, taas oo macnaheedu ma waxa aad heli kartaa, mana qaadan content kasta oo ka soo baxay waxaa ka mid ah. Si aad u aragto in aad xiriir kombiyuutarka, waxaad u baahan tahay in la soo saaro file gurmad ah, ama toos uun baarista iPhone si loo badbaadiyo xiriiro sida file ah oo la akhrin karo, haddii iPhone weli waa dhow dahay.
No arrin aad leedahay aad iPhone dhow dahay ama ma, waxaad heli kartaa qalab xiriirada iPhone shawladda halkan: Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Mac iPhone Data Recovery) ama Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery) (Windows) (taageeray macruufka 9). Software Tani waxay kaa caawin kartaa in aad Macdan aad gurmad Lugood si loo badbaadiyo xiriiro sida file ah oo la akhrin karo on your computer, ama waxaad isticmaali kartaa in ay si toos ah baarista iPhone u soo xiriiro oo uu u badbaadin. Labada siyaabo weyn shaqeeyaan.
Download tijaabo ah oo lacag la'aan ah ka hooseeya oo ku xidh on your computer.
Halkan aynu iskuday version Mac ee Wondershare Dr.Fone. Haddii aad tahay qof user Windows ah, waxba ma ahan. Waxa kale oo aad qaadi kartaa talaabooyin la mid ah sida soo socota si aad u eegto xiriirada iPhone aad PC.
Xalka si howo si aad u eegto iPhone xiriirada on Mac (PC)
In uu furmo suuqa hoose ee Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Mac), waxaa jira dhowr nooc oo qalab aad dooqa. Ka dooro mid ka mid ah kuwaaga.
Haddii aad rabto in aad aragto iPhone xiriirada ka gurmad, waxaad dooran kartaa mid ka mid hore: kabsado Lugood ee kaabta File. Haddii aad leedahay aad iPhone dhow dahay oo aan haysan file gurmad ah, waxaad dooran kartaa mid ka mid ah oo kale oo ay si toos ah baarista iPhone. Labada siyaabo ha aad u aragto iPhone xiriirada on your computer.
Tallaabada 3. Sawirka xiriirada iPhone aad
Kabsado Lugood ee kaabta File: Haddii aad doorato sidan, aad faylka gurmad on your computer ka heli doonaa. Waxaa Dooro oo guji "Start Scan" in la sameeyo xiriirada aad la akhrin karo.
Kabsado Device macruufka: Haddii aad doorato sidan, xiriiriyaan iPhone in computer iyo socda sharaxa uu furmo si ay u soo galaan hab iskaanka iPhone iyo baarista iPhone.
Wixii iPhone 4 / 3GS:
Wixii iPhone 6S Plus, iPhone 6S, iPhone 6 Plus, iPhone 6/5 / 4s:
Tallaabada 4. Save iyo aragtida iPhone xiriirada kombiyuutarka
No arrinta habka aad dooratay, waxaad heli doontaa warbixin scan hoos ku qoran. Halkan waxa aad ku eegaan kartaa dhammaan xogta ku sugan. Wixii kula soo xiriiro, waxaa hubi oo guji "Ladnaansho". Waxaad ku badbaadin karaan HTML, CSV ama VCF. Dooro mid ka mid ah aad jeceshahay, oo hadda aad ka arki kartaa xiriirada iPhone aad kombiyuutarka.